TPO, PVC, EVA, Pe Isina Mvura Sheet Extrusion Line - China TPO, PVC, EVA, Pe Isina Mvura Sheet Extrusion Line Mutengesi, Fekitori -Jwell
Jwell kambani inotora iro rakasimba roll yekubatanidza multilayers, iyi nyowani tekinoroji inoita iyo TPO jira iine basa rakanaka kupokana nemhepo kufumura. TPO isina mvura jira rudzi rutsva rwechinhu chisina mvura chigadzirwa, icho chinogadzirwa ne thermoplastic polyolefin plus antioxygen uye plastifier zvichingodaro, iyo yepakati layer iri polyester jira rekusimbisa, iyo yepamusoro yakarongedzwa nemachira fiber uye aluminium foil. Iyi mhando ye TPO isina mvura jira ine iyo
Zvimiro zvemamiriro ekunze akanaka uye kusapindirana Inonyanya kushandiswa kuimba, mugero, zvivakwa zvepasi nedzimwe nzvimbo dzisina mvura.
Inonyanya kushandiswa kugadzira PVC, EVA, PE Isina Mvura Sheet, inoshandiswa kuimba isina mvura indasitiri, kuvaka, uye yepasi, dhizaini isina mvura chirongwa mudura, dhamu, mugwagwa mugwagwa, njanji nzira tanera, bhomba pekugara, zviyo depo, kuramba marara, marara kurasa mvura, nezvimwe.
PVC Pipe yakapetwa kaviri uye ina kunze kweMagetsi Kudzivirirwa Pipe Extrusion Line